Canada mbụ Blockchain ETF mma site regulators
The Ontario Securities Commission mma Canada mbụ blockchain exchange-ahịa enweta ego (ETF), nke e debere ẹkedori na Toronto Stock Exchange n'izu ọzọ.
Harvest Portfolios, otu nọọrọ onwe ha Canadian ego management ụlọ ọrụ, gbara akwụkwọ nke mbido na-ede n'akwụkwọ ya Blockchain Technologies ETF na January, na-achọ inye Canadian investors na ohere ịzụta n'ime blockchain technology oru, dị ka Globe and Mail.
The ego ga-itinye ego “ke hara nhatanha ala nke issuers gụrụ, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na mmepe na mmejuputa iwu nke blockchain na-ekesa Ledger teknụzụ,” a Harvest Portfolios nkwupụta kwuru. The ụlọ ọrụ na-ezube maka ETF soro blockchain technology oru, mirroring ya Harvest Blockchain Technologies Index.
Dị ka Globe and Mail, abụọ ọzọ Canadian ụlọ ọrụ, First Trust Portfolios Canada na webata ego Group Inc., na-na-na-achọ ka malite blockchain ego, na gbara akwụkwọ mbụ ha prospectuses na regulators n'izu a.
The egbe nke LitePay Ọ bụghị na họpụtara ụbọchị
The egbe nke pa ...
Previous Post:Ugboro abụọ ọnụọgụ weere ekpochapụ kaadị Asset Market
Next Post:The ọhụrụ protocol Phantom ga mpi na Lightning Network